Malunga nathi -Fujian Robust Power Co., Ltd.
Imigodi ye-LED yokuKhanya okuKhanyayo
IiTowers Light Light
I-Cube ye-Cube yokuKhanya kweTower
Umatshini wePoland Wood
yemigangatho yokukhanyisa i-LED
IRobust Power® yasekwa ngonyaka ka-2007, kunye namakomkhulu abhalisiweyo ezigidi ezili-10 zeRMB. Iyakwazi ukuphuhlisa, ukuyila, ukuvelisa kunye nokuthengisa ukuvelisa iinqaba zokukhanya ezihambayo kunye nezixhobo zokukhanyisa. Ngoyilo olomeleleyo kunye nokukwazi ukukhula kunye nemveliso ezintsha, iimveliso zithengisiwe zathunyelwa e-US, Canada, Europe, South America, Southeast Asia, Middle East, Africa, Australia njl.
Umnini mhlaba oziihektare ezintlanu onemveliso yokugubungela indawo engama-23 amawaka eemitha zesikwere kwaye uqulethe ikhulu labasebenzi, ngaphezulu kwe-20% yabasebenzi benza uphuhliso kunye neqela lenkxaso yezobugcisa. Singene kolu shishino ngaphezulu kweminyaka eli-13, amava abasebenzi bethu banokukunika ubugcisa obugqwesileyo ukuze wanelise izicelo zabathengi, kwaye utshintshe uyilo.
Zonke iimveliso zethu ziyilo lokuqala ngeqela lophuhliso kunye nesoftware yoyilo ye3D, eyenziwe liqela lemveliso ngobuchwephesha bokusika njenge-laser ukusika, irobhothi yokuwelda kunye nokusonga izinto eziyintsimbi njl.njl. imveliso imveliso.
IRobust Power® iphethe amalungelo awodwa omenzi wechiza angaphezu kwama-48 ngesatifikethi selizwe. Iqela lophuhliso elinamandla livumela ukubonelela ngeemveliso ezininzi kwinqaba ekhanyayo kunye nenkonzo ekhethekileyo yokwenza ngokwezifiso nasiphi na isisombululo soshishino, sebenza ngokusondeleyo kunye neemfuno zabathengi bakho.
Umgangatho yinto ephambili ephambili yeRobust Power®, ethatha onke amanyathelo afanelekileyo okuqinisekisa nokukhusela umgangatho wemveliso. Onke amanyathelo kunye nemveliso zilandela inkqubo yolawulo lomgangatho wehlabathi i-IOS9001-2015 yokujolisa kokugqibeleleyo. Izatifikethi zemveliso, ezibandakanya i-ISO9001: 2015, i-SGS, i-SAA, i-CE, isatifikethi sovavanyo lokulwa nomoya njalo njalo. I-Robust Power® inikezela ngee nqaba ezikumgangatho ophakamileyo zokukhanya kwezibane kunye nezibane ze-LED ukufikelela kwinqanaba elingaphambili kwimizi-mveliso yamanye amazwe enobuchwephesha obuhle
Iinjongo zabantu, isiseko senqununu yeshishini leRobust Power®. Siza kuqhubeka nokuqhubela phambili sisondela kwizicelo zabathengi, ngezisombululo ezikhulayo. Njengenkampani enoluvo olomeleleyo lokuzibandakanya kwezentlalo, sijolise kunikezelo ngaphezulu kwexabiso, ngokukhuselekileyo, ngokuqaqamba, kunye neemveliso ezifanelekileyo.
Malunga neRobust Power
Ifunyanwa e-China, ukuba uthenga kuthi, sinikezela ngeenkonzo ezongezelelekileyo ezifanelekileyo.
Zonke azinakubonelelwa ngokulula ngabanye abathengisi bezixhobo zokuKhanyisa ngeMfonomfono.
Inombolo 77 Xiaohoushan, Idolophu yaseNanyu, kwiNgingqi yaseMinhou, eFuzhou, eFujian
Ifowuni: 0086-0591-83850378, 0086-0591-83850377
Iwebhu: Izibane zeRobuster